Nhau - Kuongororwa kwenzvimbo yemberi yekuvandudza kweye indasitiri yeChina yezvinyorwa
1. Ongororo yekuvandudza indasitiri yezvinyorwa
Stationery zvishandiso zvakasiyana izvo vanhu vanoshandisa mune zvetsika zviitiko senge kudzidza, hofisi, uye hupenyu hwepamba. Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwehupfumi uye tekinoroji, chikamu chemidziyo chinogara chichigadziridzwa nekugadziriswa. Zvemazuva ano zvinyorwa zvinogona kuve zvakapatsanurwa kuita maturusi ekunyora, zvinyorwa zvevadzidzi, Kune akawanda madiki-zvikamu senge emahofisi emahofisi, anobatsira ekudzidzisa, zvinyorwa uye zvemitambo zvekushandisa.
Penzura ndezve chikamu chemakambani indasitiri yezvinyorwa, uye gara uine chinzvimbo chakakosha muhofisi yemahofisi. Mapoka ayo evatengi anonyanya vadzidzi. Iyo yekuChina penzura yekugadzira fekitori yakazvarwa muma1930. Muna 1932, muKowloon, Hong Kong, maChinese akaisa mari ndokushandura fekitori yepenzura yaitungamirirwa namuzvinabhizimisi weBritish kuva fekitori yakakurumbira yepenzura. Muna 1933, Beijing China Penzura Kambani uye Shanghai Huawen Penzura Fekitori yakaonekwa imwe mushure meimwe. Wu Gengmei, akadzoka kubva kuJapan muna 1935, akatanga fekitori yekugadzira penzura inonyatso kuzivikanwa muShanghai iyo inogona kugadzira cores, mapenzura emapenji, vanochengeta peni uye kugadzirisa maitiro. Harbin China Standard Penzura Kambani, yeruzhinji-yakazvimirira mubatanidzwa, yakavambwa munaGunyana 1949. Kambani iyi ichiri imwe yemakambani makuru muindasitiri yepenzura yenyika.
Penzura dzechinyakare dzinoshandisa huni sedhiramu uye graphite senhare inotungamira, inoda huni zhinji kuti idyiwe. Huwandu hukuru hwekutema huni hunotyora pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Kuti uwane zvinodikanwa zvekusimudzira musika, muna 1969, Teijin Company yakagadzira nzira yekugadzira mapenzura epurasitiki. Muzhizha ra1973, Berol Kambani yeUnited States neSailorpen Kambani yeJapan vakatenga maitiro aya panguva imwe chete. Sailorpen yakatanga kugadzirwa kwemapenzura epurasitiki muna Kubvumbi 1977. Panguva iyoyo, hutobvu hwepenzura dzepurasitiki hwakagadzirwa nemusanganiswa we graphite neABS resini, uye pamusoro pekutungamira pakange pakafukidzwa nependi ye resin. Zvidimbu zvitatu zvakashandiswa kusanganisa zvinhu zvitatu kugadzira penzura, izvo zvakarerutsa nzira yekugadzira penzura. Zvichienzaniswa nemapenzura echinyakare emapuranga, Sailorpen yekuyedza-inogadzira ese-epenzura mapenzura ari nyore kushandisa, uye haazosvibisa mapepa nemaoko. Mutengo wakafanana newo wepenzura dzakajairika. Penzura dzeplastiki dzave dzakakurumbira. Muna 1993, mumwe mugadziri wezvinyorwa zveGerman akagadzira tambo inoramba ichigadzirwa yemapenzura epurasitiki, ayo anogona kugadzira mapenzura anosvika zviuru zvitanhatu muawa imwe chete. Penzura idzi 7.5 mm dhayamita uye 169 mm pakureba. Iyi penzura yepurasitiki inoda yakaderera kugadzirwa mutengo kupfuura mapenzura emapuranga, uye inogona kugadzirwa kuita akasiyana maumbirwo, senge akanyorwa, zigzag, moyo-wakaumbwa, nezvimwe.
Mushure mekuvandudza kwenguva refu uye kuwanda, iyo indasitiri yekumisikidza muEurope, America, Japan nedzimwe nyika yatora chinzvimbo chakakwirira muindasitiri yepasirese yekunyora. Nekudaro, nekuda kwezvinhu zvakaita semubhadharo wevashandi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, iwo ekumusoro-magumo emahofisi ekugadzira zvigadzirwa akafamba zvishoma nezvishoma achienda kuChina, India, neIndia. Vietnam nedzimwe nyika dzekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia dziri kushanduka zvishoma nezvishoma kusvika kumatanho ekushanda kwechiratidzo, chigadzirwa chigadzirwa, uye kutsvagisa zvinhu nekusimudzira.
2. Iyo yekuvandudza maitiro eiyo stationery indasitiri
1) Chinyorwa chekushandisa chinowanzo kuve chakashambadzirwa uye chakasarudzika
Peni kunyora maturusi anowanzo shandiswa mukufunda kwezuva nezuva uye basa. Nekuvandudzwa kwenzvimbo yemari yevagari uye nekuvandudzwa kwemaonero ekushandisa, vatengi vanofarira kutenga zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekuita maererano nehunhu hwechigadzirwa, dhizaini dhizaini, mufananidzo wekupedzisira, uye mukurumbira wemushandisi. Zvigadzirwa zvakagadzirwa. Mucherechedzo ndeyekuwedzera kwehunhu, hunhu, mashandiro, uye mashandisirwo emazinga emakambani zvigadzirwa. Inosanganisira maitiro ekambani, mweya uye mukurumbira, uye zvinokanganisa maitiro evatengi ekutenga.
2) Zviteshi zvekutengesa zvinyorwa zvinowanzo kusungwa
Nekusimbiswa kweiyo yekumaka tsika yekumira yekushandisa, makambani emagetsi emagetsi anoenderera mberi kusimudzira maitiro emaketani mashandiro, uye zvakajairika stationery zvitoro zvakare zvinoratidza maitiro ekushingairira kutora chikamu mukushambadzira. Zvitoro zvakajairwa zvekumisikidza zvaimbove nzira huru yekutengesa zvinhu, asi nekuda kwezvipingamupinyi zvekupinda zvakaderera uye nemakwikwi emitengo inotyisa, zvitoro zvakawanda zvakajairika zvine purofiti isina kusimba, mashandiro asina kugadzikana uye akatombozvibvisa nekuda kwekutarisira zvisirizvo uye mari isina kukwana. Franchising brand stationery cheni mashandiro anoita kuti uvandudze mufananidzo wechitoro, kusimudzira mamiriro emhando yezvigadzirwa zvakatengeswa, nekusimudzira kugona kurwisa njodzi kune imwe nhanho. Naizvozvo, mumakore achangopfuura, maitiro ezvinyorwa zvekutengesa zviteshi zvetambo ave akakosha.
3) Chinyorwa chekushandisa chinoteerera kune yakasarudzika uye yepamusoro-magumo
Parizvino, vadzidzi uye vechidiki vashandi vemuhofisi vanofarira zvekugadzira, zvakasarudzika, uye zvemafashoni zvinyorwa. Zvinyorwa zvakadaro zvinowanzo kuve neyeakasarudzika dhizaini dhizaini, inoverengeka uye fashoni chitarisiko, uye ane mavara mavara, ayo anogona kusangana neakakosha anoshanda anodikanwa uye zvakanyanya Kuvandudza mutengi mushandisi ruzivo. Panguva imwecheteyo, muminda yemifananidzo, zvemari, dhizaini uye zvipo, nyanzvi dzepamusoro-magumo mapepa emashopu evatengi ari kuwedzera, uye epamusoro-magumo mapepa ane hunyanzvi hwakasimba, mhando yepamusoro uye yakakosha kukosha zvazove zvishoma kupenya nzvimbo yekusimudzira zvinyorwa zvekushandisa. Kuti uwane zvimwe zvakakosha zveindasitiri, ndapota tarisa kune yekumisikidzwa indasitiri yekuongorora mushumo ongororo yakaburitswa neChina Chiitiko Horo.